Cumaan oo xayiraad kusoo rogtay siddeed dal oo Afrika ka tirsan - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Cumaan oo xayiraad kusoo rogtay siddeed dal oo Afrika ka tirsan
Cumaan oo xayiraad kusoo rogtay siddeed dal oo Afrika ka tirsan
Dowladda Cumaan ayaa ku dhawaaqday go’aan ay muddo 15 maalmood dalkeeda uga xayirtay dadka kasoo safra 10 waddan, si ay u xakameyso fiditaanka cudurka Covid-19.
Tobanka waddan waxaa ka mid ah siddeed dal oo ku yaalla qaaradda Afrika. Waxay kala yihiin: Suudaan, Koonfur Afrika, Nigeria, Tanzania, Ghana, Itoobiya, Guinea iyo Sierra Leone.
Labada dal ee kale ayaa kala ah Brazil iyo Lubnaan.
Xayiraaddan ayaa dhaqan galeysa laga billaabo maalinta Khamiista ah.
Go’aankan ayaa saameynaya dadka kasoo safra dalalka haddii ay soo maraan waddamada xayiraadda lagu soo rogay, haddii ay ugu 14 maalmood gudahood tahay.
Muwaadiniinta u dhahshay Cumaan, diblomaasiyiinta iyo qoysaskooda ayaan ku jirin dadka la xayiray, sida ay sheegeen guddiga loo xil saaray la dagaallanka Covid-19 ee boqortaayada carbeed.
Wasiirka Caafimaadka ee Cumaan ayaa horaantii bishan sheegay in dadka kasoo safra dibadda, gaar ahaan kuwa ka imaada Bariga Afrika, ay noqdeen 18% ka mid ah dadka cusub uu ku dacay fayraska ee gudaha dalkaas.
Previous articleDHAGEYSO:-Warka Duhur ee Radio Risaala 23-02-2021
Next articleMaxay ka wada hadleen Axmed Madoobe & Wakiilo ka socday Beesha Caalamka?